Chii Chiri Chinangwa Uye Chinongedzo cheHupenyu? (Haisi Zvaunofunga) - Blog
Ongorora: Kana iwe uri kunyatso kubvunza iyo yehupenyu kana yekurarama, unogona kushushikana. Kana iwe uchifunga kuti izvi ndizvo zvazviri, bata chiremba wako kana nyanzvi yehutano ipapo ipapo. Kana batanidza zvakananga nachiremba kuti uwane rubatsiro rwaunoda - tinya pano kuti uwane imwe.
Chii chiri chinangwa cheupenyu?
Ndinoshuva dai ndaikupa mhinduro yakapusa uye yakajeka kumubvunzo uyu, asi handikwanise.
Zvakanakisa zvandingaite kutaura izvi:
ndiudze chimwe chinhu chinonakidza nezvako mienzaniso
Chinangwa chehupenyu kutsvaga nzira yekukanganwa nezvemubvunzo: 'Chii chiri chinangwa cheupenyu?'
Kuedza kutsvaga poindi yehupenyu rwendo rwunowanzo kuve nemubairo.
Zvinoita sekunge mhinduro yauri kutsvaga isingawanikwe zvachose.
Uye mhinduro dzaunowana hadzigutse kutaura zvishoma.
Kwese kwaunotarisa uye chero waunobvunza, zvese zvaunoita seunowana izere yakawanda-yakanaka-ine zano kuraira.
Uye iri zano harisi iro zano rakaipa hazvo (kunyange mamwe acho ari). Asi izano rinowanzoita chinhu chimwe…
Iyo inounganidza kumanikidza pauri.
Zvinoita kuti unzwe sekunge iwe unofanirwa kuita X, Y, kana Z kuti uwane chinangwa chako chechokwadi muhupenyu.
Uye kuti kana ukasadaro, uchafa wakasuruvara uye unonetsekana uine kuzvidemba kwakawanda pamusoro pekuti wararama sei hupenyu hwako.
Ndiani anoda izvozvo?
Iwe unoona, iyo poindi yehupenyu kurarama.
Hapana chikonzero chekuita chero chakaomesesa kupfuura icho.
Hapana chikonzero chekuwana imwe nhanho yeruzivo uye nzwisiso.
Hapana chikonzero chekudzingirira zvimwe zvinangwa kana zviroto.
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutsvaga nzira yekumira kuisa zvakanyanya kusimbisa kudiwa kwekuita chimwe chinhu, kuve mumwe munhu, kana kunzwa chimwe chinhu.
Saka iro zano rine chinangwa chakanaka rinotsvaga kudzikisira pasi chinangwa chehupenyu kuita zvidimbu zvidiki zve 'huchenjeri' sekufara, kuda vamwe, siya nhaka, uve 'yakanakisa vhezheni' yako ...
Hazvina kunyanya kukanganisa, zvinongotarisa pane zvinoitika.
Uye kuzadzisa mhedzisiro kuri kusvika kwairi kuenda.
Ukasambosvika ikoko, unonzwa usingazadzikiswe zvachose.
Uye kana ukadaro, chii chinotevera?
Pane mukana wakanaka wekuti izvo zvinouya mushure mekunzwa kwekushushikana kuti iwe ungarasikirwa nekubata kwako pane izvi mhedzisiro uye woona kuti hauna kusvika kwauri kuenda shure kwezvose.
Zvakafanana nekuedza kutamba tag nemumvuri wako - haungambo kwanisa kusvika pairi kunyangwe ukamhanyira kwakadii.
Iwe unenge uri nani kutendeuka, wakatarisana nezuva, uye uchikanganwa kuti mumvuri wako uripo.
Zuva ndihwo hupenyu. Iwe unofanirwa kutendeuka wosangana nehupenyu pane kudzingirira imwe mhinduro kumubvunzo usingapindurwe.
Parizvino, unogona kutarisa kune vamwe vanhu uye unoshamisika kuti vanofamba sei neupenyu hwavo hwadzokororo uye vasingaite kunge vasina basa nekwavari kuenda ...
Chokwadi ndechekuti, avo vanhu vanoenda nezve hupenyu hwavo havana kuremerwa nemutoro wekurarama hupenyu hwechinangwa.
Ivo vari kungorarama hupenyu. Icho ndicho chinangwa pachako.
Vanogona kusagara vachifara. Vanogona kunge vasiri kuita rakakura rakakonzera pasirese. Vanogona kunge vasina kubudirira mumaziso ako. Vanogona kunge vasingaratidzike kunge vari kukura semunhu…
Asi ivo vanogona zvakare kugutsikana nekwavari pane iwe zvauri nekwauri iwe.
Saka, ndapota, usaenzanise chinangwa chehupenyu nechimwe chiito chikuru kana chiito. Mudiki uye muhombe akanaka munzira dzawo.
Haasi munhu wese achawana hupfumi hwakawanda kana mukurumbira.
Haasi munhu wese anosvika pamwero wepamusoro wekujekeswa pamweya.
Haasi munhu wese achawana kurarama hupenyu hwezviroto zvavo.
Muchokwadi, vanhu vanowana zvinhu zvakadaro vashoma.
Dai zvinhu izvi zvaive chaizvo iyo poindi yehupenyu pachahwo, isu taizonyanya kuve rudzi rwakanyanya kushushikana.
Apo, chaizvo, zvakawanda zvekusagutsikana vanhu zvavanonzwa nehupenyu hwavo hazvisi zvekushayikwa kwezvinhu izvi chaizvo, asi nekuda kwekutenda kuti zvinhu izvi zvinotungamira kugutsikano.
Chinzvimbo hachisi chinhu chakashata kuve nacho muhupenyu nechero nzira chero bedzi iwe usingaenzanise chinhu chaunoshuvira kuwana nechinangwa chako chekupedzisira muhupenyu.
Seizvo guru guru rakataura nenzira kwayo, hupenyu huri pamusoro pekunakidzwa nerwendo uye akawanda kumusoro uye pasi munzira.
Uye unonakidzwa nerwendo na kuvapo munguva zhinji sezvaungagone .
Nekusazobatirirwa munzira chaiko kwauri kuenda kana chii chinomira iwe uchaita munzira.
Zvino zvandakatsanangura kuti nei uchifanira kumira kutsvaga chinangwa chehupenyu, ngationgororei dzimwe nzira dzakajeka dzekuzviita.
Sei Kukanganwa Nezve Mubvunzo We 'Chinangwa'
Kana iwe wasvika peji ino, mikana iwe wave uchishamisika kuti chii icho kukosha kwezvose zviri.
Uye iwe unogona kunge wanga uchifunga nezve izvi kwechinguva.
Muchokwadi, kuda kunzwisisa kuti chii chinangwa chehupenyu kunogona kuve kushushikana.
Saka kuti unzwe kuti iwe unofanirwa kufunga kupedzisa kwako kutsvaga kwechinangwa kungave kusiri nyore kutora.
Ndezvipi zvimwe zvinhu zvaungaite kuti uchinjise pfungwa dzako kure nerudzi rwekufunga?
Imwe yenyaya huru dzakakomberedza kutsvaga kwemunhu chinangwa uye chinangwa muhupenyu ndechekuti isu tinopokana nekusingaperi kana izvo zvatinofunga simba uyai nazvo chaizvo kuda chiunze.
Saka takatsunga kuti tiwane nzira yakanakisa yehupenyu hwechinangwa yatinobatirirwa nesarudzo dzatinoita.
Isu tinovavarira kuwedzera chimwe nechimwe mhedzisiro, asi hatife takaziva kana sarudzo yatakaita yaive chaiyo yakanakisa yatinowana.
Saka tinosara tichizvibvunza 'ko kana?'
Ko kana isu tasarudza imwe nzira? Tingave tave kufara uye kuswedera padyo nechinangwa chedu chekupedzisira?
Asi pane imwe nzira. Imwe pfungwa iwe yaunogona kutora.
Anogutsa anotsanangurwa semunhu ano gadzirisa sarudzo iyo yakanaka zvakakwana pasina hazvo kuva iyo inotungamira kumhedzisiro.
Vanogutsa havakwanisi kusangana nekuzvidemba, uye vanowanzove vanofara nesarudzo dzavanoita ( mabviro ).
Paunotarisana nesarudzo muhupenyu - hombe kana diki - edza kusanetseka nezvayo zvakanyanya.
Fungidzira iwe uri parwendo rwechitima uye iwe unosvika pane imwe nhanho apo iyo forogo forks inopinda kuita maviri.
Unogona kuunza chitima kuti umire uye upedze mazera uchiedza kusarudza kuti wova kuruboshwe here kana kuti kurudyi ...
… Kana iwe unogona kubvuma kuti hapana sarudzo inomiririra kupera kwerwendo, sarudza imwe, uye ramba uchifarira maonero kubva pahwindo.
Iwe hauzive zvechokwadi kana iwo maonero kubva kune imwe nzira angadai ari nani, asi sekureba sekunge iwe uchinakidzwa nemaonero aunayo, ndiani ane hanya?
'Zvakwana' ishoko rine simba kana zvasvika pakunzwa kugutsikana nehupenyu.
Iwe unogona achiri kushanda kune chimwe chinhu zvakare, asi kana iwe uchiziva kuti izvo zvaunazvo izvozvi zvakakwana, chero chinhu chekuwedzera hachiwedzere zvakanyanya kuhupenyu hwako, asi ndokupa iwe maonero akasiyana pazviri.
Chinangwa chako hachifanirwe kuve chinja nyika mune chero nzira hombe - zvaunoita zuva rega rega uye zvakakwana kushandura nyika mukati yako nzira.
Kana isu tichishushikana nezvekuwana iyo imwechete yechokwadi hupenyu, tinotarisa hupfumi pamberi pedu chaipo.
Hupfumi ihwohwo ndihwo zvakakwana kune chero munhu.
Ungaita Sei Kuti Ufare Uye Gutsikana Nezvaunazvo Muhupenyu
Gumi Enhetembo Dzakanakisisa Nezve Hupenyu
Wana Nyaradzo Nekusagadzikana
Iko hakuna kuramba izvo.
Kunyangwe iri kushungurudzika kwebasa kana kukwira nekudzika kwehukama, tinosangana nenguva dzisinganzwe zvakanaka.
Uye patinonzwa zvakashata, tinotanga kubvunza kana isu tingave tichiita chimwe chinhu chisina kunaka.
'Pane chandiri kurasikirwa here?' tinogona kufunga.
Kana uchitarisana nematambudziko ehupenyu, zvakajairwa kuedza kuwana mhinduro.
Mhinduro iyoyo, tinofunga , inowanzo kuve chinangwa chepamusoro kuhupenyu hwedu chatiri kushaya parizvino.
Asi chokwadi ndechekuti, hupenyu huchave husina kugadzikana dzimwe nguva.
Zvinhu hazvingagare zvichienda sezvaungatarisira.
Uchadaro ndinonzwa kuora mwoyo kana kutonetseka nezviitiko.
Ipo iwe uchinyatso kuwana mhinduro dzematambudziko mazhinji ehupenyu, mamwe ausingagone.
Dzimwe nguva iwe unongofanirwa kuburitsa zvinhu kunze uye kumirira kuti hupenyu huitike. Uye izvi zvinogona kutora chinguva.
Zviri panguva idzi, apo iwe wakamirira kuti mamiriro acho avandudzike, kuti iwe ungaedzwe kutsvaga chikuru chinangwa muhupenyu hwako.
Iwe unofunga kuti kana iwe uchigona kuwedzera chinangwa kuhupenyu hwako, zvinogona kubatsira kuzadza gomba rinokonzerwa nemarwadzo auri kunzwa iye zvino.
Ramba muedzo iwoyo.
Sezvo isinganakidze sezvo hupenyu hwako hungaratidzika izvozvi, inozopedzisira yanzwa zviri nani zvishoma.
Zvishoma nezvishoma, mafungiro ako achavandudza. Zvinhu zvinoita sezvisina kujeka.
Asi kana iwe ukaedza kuwana chirevo mukutambura kwako, zvinongo kwowedzera.
Iwe unogona zvirokwazvo kutsvaga zvikonzero zvekutsungirira kuburikidza nedambudziko rako razvino - zvinhu zvinokupa simba rekuti urambe uchienda.
Asi kubvuma kuti iwe unozonzwa zvakashata pane dzimwe nguva kunokutendera iwe kuti udzivise musungo wekubaya tarisiro dzako dzose pakuwana chinangwa chako chechokwadi.
Kanganwa Zvinoitwa Nevamwe Kana Zvavari Kufunga
Vanhu vanobvunza kuti chii chinangwa chehupenyu pazvikonzero zvakawanda.
Chimwe chikonzero ndechekuti vanoona zviri kuitwa nevamwe vanhu uye vanonetseka kana vachifanira kunge vachiita izvo futi.
Kana ivo vanoteerera kune zvinotaurwa nevamwe vanhu nezvavo uye vanozvitora seuchapupu hwekuti ivo havasi kuita izvo 'zvakanaka' chinhu.
Saka kuti ukanganwe nezvemubvunzo wechinangwa muhupenyu, zvinokurudzirwa kuisa zviri kuitwa nevamwe kana kutaura kunze kwepfungwa dzako.
Izvi zvakaoma munyika yedu iri kuwedzera kubatana, asi hazvigoneke.
Chinokosha ndechekuedza kusaona zviri kuitwa nevamwe sehupenyu hwakanaka uye kusatambira zviri kutaurwa nevamwe sechokwadi chevhangeri.
Kana iwe uchishuvira hupenyu hwevamwe vanhu, iwe unozviisa pamusoro pechimwe chirevo. Asi ivo vanoto sangana nematambudziko mazhinji akafanana - kusagadzikana kwakafanana - sewe.
nguva yekuziva kuti hukama hwako hwapera
Zvinogona kutaridza sekunge vane hupenyu hwakafungidzirwa, asi ini ndinokuvimbisa ivo havana.
Vari kungoenda nayo sezvatinofanira kuita isu tese.
Kana vachiratidzika kunge vanofara zvechokwadi, zvibvunze kuti vakanyatso kuwana here imwe chete, inotarisisa poindi yehupenyu kana kuti ivo vari kungokwanisa kumbundira nguva dzehupenyu nerwendo rwavari pariri.
Ndinokuvimbisa kuti ndezvekupedzisira.
Uye kana mumwe munhu akasabvumirana nemararamiro ako hupenyu - kana ivo kurerutsa sarudzo dzaunoita - isa izvi semaonero avo uye hapana chimwezve.
Ivo vanogona kusarudza kurarama hupenyu hwavo zvakasiyana, asi iwe haufanire kugamuchira zvavanotaura sechokwadi.
Kana iwe uchida kurarama neimwe nzira, zviite.
Kana iwe uchibvumira vamwe kukuita iwe kufunga iwe uri zvisizvo munzira yaunogara, mhedzisiro isingadzivisike kutsvaga kwechimwe chinhu chiri rudyi ...
… Kutsvaga kwechinangwa.
Kana iwe uchiramba uchizviyeuchidza iwe pachako kuti hapana chakaipa kana nzira kwayo yekurarama, hauzonyengerwe mukufunga kuti uri munzira isiriyo.
Rega Yako Intuition Uye Maitiro Akutungamirire Iwe
'Chii chinangwa chehupenyu?' mubvunzo unobva mupfungwa kuti anonzwa akarasika .
Iko kutsvaga kwekutungamirirwa. Icho chishuwo chekunzwa kuvimba mune zvauri kuita.
Iwe unonzwa iwe uchifanira kuziva chinangwa chako muhupenyu kuitira kuti igone kuzivisa maitiro ako ekutora sarudzo.
Asi kune imwe sosi yekutungamira inowanikwa kwauri - kana iwe wakagadzirira kuzviteerera.
Intuition yako yakanaka pakusarudza nzira iyo inonzwa zvakanaka. Inoita izvi zvichibva pane yako yemukati tsika.
Mune mamwe mazwi, nekuteerera ura hwako, unogona kuita nenzira inonyanya kukodzera yako yemukati kambasi tsika.
Intuition yako haizive kuti chii chinangwa chehupenyu, asi haina basa. Izvo zvinongoziva zvinonzwa zvakanaka uye zvakanaka mune chero mamiriro akapiwa.
Ukazvitendera, zvinokuratidza gwara chairo zvako panguva iyoyo.
Intuition chinhu chaicho chaicho. Izvo zvinonzwa zvakakunakira iwe ungasanzwira zvakanaka kune mumwe munhu.
Uye uhu humwe humboo hunoratidza kuti hupenyu hauna chinangwa chimwe kana kunongedzera kwahuri.
Maitiro Ekutarisa NezveKutsvaga Kwako Kune Chinangwa (aka Izvo Zvisingaite)
Regai ndigovane newe zvishoma zvezvinhu zvaunogona kuwana kana uchitsvaga internet nekuda kwehupenyu ...
ongorora nyika / enda pane chiitiko
svika pane zvaunogona
uve mudzidzi weupenyu hwese
rarama hupenyu zvizere
batanidza kuchinangwa chepamusoro
rarama nyaya yegamba
kukudziridza hukama hwakanaka
gadzira nyika ive nzvimbo iri nani
Chinyorwa chakakodzera che zvinhu zvekushuvira muhupenyu , Ndine chokwadi chekuti unobvuma.
Asi chinangwa chako chechokwadi hachiwanikwe muzvinhu izvi.
Sezvandambotaura nezvazvo, hazvina kuchenjera kuisa mamiriro pachinangwa chako. Iwe haufanire kunzwa kumanikidzwa kuve, kuita, kana kunzwa chimwe chinhu.
Mhedzisiro isingadzivisike yekuisa mamiriro pachinangwa ndechekuti iwe uchanzwa kushomeka kwechinangwa iwe ukatadza kuzadzisa izvo zvimiro.
Ko kana iwe usingakwanise kufara nguva dzese - kana kunyangwe yakawanda yenguva?
Ko kana iwe usiri kuda kuongorora nyika?
Ko kana iwe usiri kuda kuzvimanikidza iwe kuti uwane kugona kwako?
Ko kana iwe usina nhaka huru yekusiya kumashure?
Wakambopotsa here chinangwa chehupenyu zvachose?
Wakakundikana pahupenyu here?
Ndinogona kukuvimbisa kuti hauna.
Chinangwa chehupenyu hachisi mhedzisiro. Haisi seti yemabhokisi ekumaka pane fomu.
Hauzosvika rimwe zuva ukati, 'Hekani! Ndazadzisa chinangwa changu! ”
Chokwadi, izvo zvinhu zviri mune zvakanyorwa pamusoro zvinogona kutungamira kuhupenyu hunonakidza, asi kushomeka kwazvo hakufanirwe kutungamira kune hupenyu husinganakidze.
Kana iwe ukangoyedza kuve, kuita, kana kunzwa chimwe chinhu, chako kutsvaga kwechinangwa hakuzomboperi.
Ndokusaka zvidimbu zvina zvemazano muchikamu chakapfuura zvese zviri zvekugadzirisa pfungwa dzako, kwete kuzadzisa chinangwa chakati.
Kana iwe ukavavarira kukwana, gamuchira kusagadzikana, kanganwa zvinoitwa nevamwe kana kutaurwa nevamwe, uye teerera kune yako intuition, hausi kutsvaga zvimwe…
Iwe uri kugamuchira izvo zviri.
wwe 2k18 dlc vakasimba boyz
Iwe uri kudzikamisa kumanikidzwa pauri kuti ufambire mberi kune imwe mhedzisiro.
Mhedzisiro yacho haina basa. Kunakirwa kwako nerwendo ndiko kwakakosha.
Kana iwe ukagara kumashure uye uchinakidzwa nemaonero kubva pahwindo rechitima sezvo richipfuura nemamiriro ehupenyu, hauchanzwi uchimanikidzwa kupindura mubvunzo 'Chii chinangwa chehupenyu?'
kutaura sei kana hukama hwapera
sei ndakanamatira pamusikana wangu
wwe mitemo yakanyanyisa 2018 rukova rarama